အမွန္တရားကို နဂိုကထက်ပိုမြတ်နိ်ုးလာပြီး ရိုးသားတဲ့ကရင်လူမျိုးတွေနဲ့ဆုံတွေ့ရတာမို့ ဘယ်တော့မှ နောင်တရမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ မေဦး… – Daily News
လူချစ်လူခင်ပေါများပြီး အေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်တတ်တဲ့ ထိပ်တန်းမိတ်ကပ်ပညာရှင် မေဦးကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ကတည်းက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တစ်သားတည်းရပ်ပေးခဲ့ပြီး တက်ကြွစွာ ပါဝင်ပေးခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါဝင်ခဲ့ရင်း ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့ ထပ်တူကြတဲ့ မေဦးကတော့ လက်ရှိမှာ ၅၀၅(က)ဖြင့် အမှုဖွင့်ခံထားရတာကြောင့် လွတ်မြောက်နယ်မြေ တစ်နေရာမှာ ခေတ္တတိမ်းရှောင်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လွတ်မြောက်နယ်မြေကို ရောက်ရှိနေပေမယ့်လည်း မေဦးကတော့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကတစ်ဆင့် ပြည်သူတွေ အားမလျော့စေဖို့အတွက် အမြဲအားပေးနေတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ တောထဲကို ရောက်နေပေမယ့်လည်း ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် မကြာခဏ သူ့ရဲ့
လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို ဖော်ပြပေးတတ်တာ တွေ့ရပါတယ်။ယခုမှာလည်း အမှန်တရားဘက်မှာ ရပ်တည်နေတဲ့ မေဦးကတော့ လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ နောင်တရလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးတစ်ခုကို ဖြေကြားလာတာ တွေ့ရပါတယ်။
မေဦးရဲ့ လေးစားစရာ ဖြေကြားချက်လေးမှာ နောင်တရလားမေးလာရင် လုံးဝနောင်တမရပါဘူး..ယခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကနေပြီး ကိုယ္မသိသေးတဲ့ အရာတွေကိုသင်ယူလိုက်နိုင်ရတယ် ရိုးသားပြီးလူသားဆန်တဲ့ကရင်လူမျိုးတွေနဲ့ မိသားစုဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အပြင် Finally အမှန်တရားကိုအရင်ထက် မြတ်နိုးပြီး အမှန်တရားဘက်မှာ ရပ်ခွင့်ရတဲ့ လူသားဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တယ်. ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှနောင်တမရပါဘူးဆိုတဲ့ ရဲရင့်ပြတ်သားတဲ့ သူရဲ့ ခံယူချက်တွေကတော့ ဖွင့်ဟထားခဲ့တာပါ။ စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြတဲ့ ခံယူချက်တွေနဲ့ မပြောင်းလဲသွားခဲ့တဲ့ မေဦးကိုတော့ ပရိသတ်တွေကလည်း အားပေးစကားတွေပြောပေးခဲ့ပါဦးနော်။
အမှန်တရားကို နဂိုကထကျပိုမွတျနျိုးလာပွီး ရိုးသားတဲ့ကရငျလူမြိုးတှနေဲ့ဆုံတှရေ့တာမို့ ဘယျတော့မှ နောငျတရမှာ မဟုတျဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ မဦေး…
လူခဈြလူခငျပေါမြားပွီး အေးအေးဆေးဆေးနထေိုငျတတျတဲ့ ထိပျတနျးမိတျကပျပညာရှငျ မဦေးကတော့ ဖဖေျောဝါရီလ (၁) ရကျနကေ့တညျးက ဖွဈပျေါခဲ့တဲ့ အခွအေနမြေိုးမှာ ပွညျသူတှနေဲ့အတူ တဈသားတညျးရပျပေးခဲ့ပွီး တကျကွှစှာ ပါဝငျပေးခဲ့သူပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုပါဝငျခဲ့ရငျး ပွညျသူတှရေဲ့ဆန်ဒနဲ့ ထပျတူကွတဲ့ မဦေးကတော့ လကျရှိမှာ ၅၀၅(က)ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ခံထားရတာကွောငျ့ လှတျမွောကျနယျမွေ တဈနရောမှာ ခတ်ေတတိမျးရှောငျနရေတာ ဖွဈပါတယျ။
လှတျမွောကျနယျမွကေို ရောကျရှိနပေမေယျ့လညျး မဦေးကတော့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာကတဈဆငျ့ ပွညျသူတှေ အားမလြော့စဖေို့အတှကျ အမွဲအားပေးနတောလညျး တှရေ့ပါတယျ။ ခကျခဲကွမျးတမျးတဲ့ တောထဲကို ရောကျနပေမေယျ့လညျး ခဈြတဲ့သူတှအေတှကျ မကွာခဏ သူ့ရဲ့
လှုပျရှားမှုလေးတှကေို ဖျောပွပေးတတျတာ တှရေ့ပါတယျ။ယခုမှာလညျး အမှနျတရားဘကျမှာ ရပျတညျနတေဲ့ မဦေးကတော့ လကျရှိကွုံတှနေ့ရေတဲ့ အခွအေနမြေိုးမှာ နောငျတရလားဆိုတဲ့ မေးခှနျးလေးတဈခုကို ဖွကွေားလာတာ တှရေ့ပါတယျ။
မဦေးရဲ့ လေးစားစရာ ဖွကွေားခကျြလေးမှာ နောငျတရလားမေးလာရငျ လုံးဝနောငျတမရပါဘူး..ယခုဖွဈပကျြနတေဲ့ အခွအေနတှေကေနပွေီး ကိုယ်မသိသေးတဲ့ အရာတှကေိုသငျယူလိုကျနိုငျရတယျ ရိုးသားပွီးလူသားဆနျတဲ့ကရငျလူမြိုးတှနေဲ့ မိသားစုဖွဈခှငျ့ရခဲ့တဲ့အပွငျ Finally အမှနျတရားကိုအရငျထကျ မွတျနိုးပွီး အမှနျတရားဘကျမှာ ရပျခှငျ့ရတဲ့ လူသားဖွဈခှငျ့ရခဲ့တယျ. ဟုတျကဲ့ ကြှနျတျောဘယျတော့မှနောငျတမရပါဘူးဆိုတဲ့ ရဲရငျ့ပွတျသားတဲ့ သူရဲ့ ခံယူခကျြတှကေတော့ ဖှငျ့ဟထားခဲ့တာပါ။ စိတျဓာတျပွငျးပွတဲ့ ခံယူခကျြတှနေဲ့ မပွောငျးလဲသှားခဲ့တဲ့ မဦေးကိုတော့ ပရိသတျတှကေလညျး အားပေးစကားတှပွေောပေးခဲ့ပါဦးနျော။
Previous Article ယူနီဖောင်းအပြည့်အစုံနဲ့လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ မင်းသားချောဟိန်းထက်
Next Article မြေအောက်မှာ မီးလောင်နေတဲ့ သရဲခြောက်တဲ့မြို့ပျက်ကြီး ( သို့ ) ဆန်ထရဲလီယား